भीष्मलाई वाणशय्यामा देखेर किन हाँसिन् द्रौपदी ? महाभारतको रोचक कथा
जेठ २९, २०७६
महाभारतमा अनेकौं रहस्यमय कथाहरू छन् । यस्तै एउटा कथा यहाँ हामी बताउँछौं ।
महाभारतको युद्ध अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । अम्बाले भीष्मको मृत्युको कारण बन्छु भनी गरेको प्रतिज्ञा पूरा गर्न शिखण्डीको रूपमा पुनर्जन्म लिएर अर्जुनलाई मद्दत गरेको अवस्था थियो ।
अर्जुनका वाणहरूले भीष्मको शरीरलाई चाल्नो बनाइदिएका थिए । तर उनलाई इच्छामृत्युको वरदान प्राप्त भएकाले यमराजले पनि प्राण हर्न सक्दैनथिए ।
वाणको शय्यामा पल्छिएर उनी महाभारतको युद्धको परिणाम प्रतीक्षा गरिरहेका थिए ।
युद्धको नियमअनुसार सूर्यास्तपछि युद्ध रोकिन्थ्यो र सबै योद्धाहरू भीष्मको शय्यानजिक भेला हुन्थे ।
भीष्मले उनीहरूलाई प्रवचन दिन्थे । एकदिन यसैगरी भीष्मले प्रवचन दिँदै गर्दा गम्भीर वातावरणका बीच द्रौपदी अचानक हाँस्न थालिन् ।
द्रौपदी हाँसेको देखेर भीष्मलाई रिस उठ्यो र किन हाँसेकी भनी सोधे ।
जवाफमा द्रौपदीले संवेदनालाई हल्लाउने कुरा भनिन् । उनले भीष्मलाई कौरवहरूको दरबारमा आफूमाथि गरिएको अमानवीय दुर्व्यवहारका बारेमा सम्झाइन् । भीष्म पितामह त्यसका साक्षी थिए तर विरोध गर्न सकेनन् भनी द्रौपदीले बताइन् ।
द्रौपदीको मनमा गढेको त्यो क्षोभ नै व्यंग्यात्मक हाँसोका रूपमा बाहिर निस्कियो ।
भीष्मले स्पष्टीकरण दिँदै भने, ‘त्यतिखेर म कौरवहरूले दिएको अन्न खाएर बसेको थिएँ र जसको अन्न खाइन्छ, उसको विरोध गर्नु सही हुँदैनथियो । धृतराष्ट्र र दुर्योधन जस्ता अधर्मीहरूको अन्नले मेरो जिभ्रो बाँधिएको थियो, त्यसैले म विरोध गर्न असमर्थ थिएँ । अहिले अर्जुनका वाणहरूले त्यो दूषित अन्नले बनेको रगत बगेर गइसक्यो र म प्रवचन गर्न योग्य भएको छु ।’
यो सुनेपछि द्रौपदीले भीष्मसँग माफी मागिन् र उनले माफ पनि गरिदिए ।
एकाबिहानै ॐ उच्चारण गर्दा हुन्छ फाइदै फाइदा
के हो श्रीकृष्णका १६ हजार पत्नीको रहस्य ?
रावण र दुर्योधनका पत्नीले पति मरेपछि गरेका थिए अन...
मनमनै जप्नुहोस् यो मन्त्र, ‘दुःख’ टाढा हुनेछ
'महानायक राजेश हमाल नै हुन्, अरू त सबै हास्य कलाकार'
समाजमा व्यास वचनमाथि विश्वासको संकट
असार २७, २०७७
नक्कली भाञ्जा बनाएर मिर्गौला प्रत्यारोपण: चिकित्सकसहित १२ पक्राउ, पूर्वप्रहरी रहेका व्यक्ति विचाैलिया
सुदूरपश्चिममा ३३ प्रतिशत सङ्क्रमित निको
काेराेना भ्याक्सिनको सफल परीक्षण भएकाे रुसकाे दाबी
कैलाश पर्वतसँग जोडिएको रहस्य, के साँच्चै भगवान शिव बस्छन् ?
हतारमा फुट्ने र फुर्सदमा पछुताउने अवस्था आउन नदिन लागिपरेकाे छु- प्रचण्ड
'अनर्गल समाचारले नेपाल-भारतको भावनामा गम्भीर आघात पुर्‍याउछ'
टेक्सासमा प्रहरीमाथि गोली प्रहार, २ प्रहरी अधिकृतको मृत्यु
म्याग्दीको पहिरोमा बेपत्ता थप एक जनाको शव फेला